Haisoratra Book Clubs & Classes
Lisitra amin'ny Preferences Group
Tena zava-dehibe ny fisafidianana ny klioban-tsoratra, saingy miaraka amin'ny boky be dia be ary karazana vondrona samihafa, ahoana no ahazoana antoka fa ny toro-hevitra dia tsara ho an'ny klioban'ny bokinao? Ireto lisitra fanolorana ireto dia ahitana ny filazalazana momba ny karazana vondrona mety hankafizin'ireo boky.
Lisitry ny famakiam-boky ho an'ny taona iray
Raha toa ny bokin'ny kliobanao dia mamaky boky samihafa malaza, tantara fiction sy tsy fiction, manandrama lisitry ny mpamaky klioban'ny herintaona . Ity dia santionan'ny boky sasany izay nesorina niaraka tamin'ireo klioban'ny boky nandritra ireo taona vitsy lasa. Bebe kokoa "
Ny tantaran'i Edgar Sawtelle nataon'i David Wroblewski. HarperCollins
Oprah Winfrey dia nandray ny klioban'ny boaty ho amin'ny ambaratonga vaovao raha nanomboka ny Book Club of Oprah izy tamin'ny taona 1996. Nanomboka teo dia nampiseho boky maherin'ny 60 tao amin'ny kliobany sy ny fandaharam-pitenenany izy nanomboka teo. Ny safidy momba ny bokin'ny Oprah dia mifototra amin'ny famintinana mazava ho an'ny fanabeazana. Raha manome lanja ny hevitr'i Oprah ianao na te hamaky boky izay efa novakian'ny maro hafa, dia jereo ity lisitra feno amin'ny bokin'ny Oprah's Club Club ity . Bebe kokoa "
Namono an'i Harper Lee hamono siramamy. Harper Perennial
Ny klioban'ny boky dia toerana tsara hahavitana ny famakiana ny literatiora efa nomaninao any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa na oniversite. Fiaiken-keloka: Nataoko tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa sy tany amin'ny oniversite tsy misy dikany amin'ny teny Anglisy aho ary tsy voatendry hamono ny mockingbird ! Namaky azy voalohany aho tamin'ny klioban'ny bokiko. Raha te hiditra any amin'ny kilasy sasany ny bokin'ny bokinao, dia jereo ireo boky ireo avy amin'ny lisitry ny vakiteny ambaratonga faharoa . Bebe kokoa "
Ny Trano ao Sugar Beach avy amin'i Helene Cooper. Simon & Schuster
Raha mifantoka amin'ny fiction ny ankamaroan'ny klioban'ny bokim-pahaizana, dia mety ho fomba mahafinaritra hianarana momba ny olona na zava-nitranga ara-tantara ny memoirs. Na maniry ny hiova ny paikan'ny bokinao na hanapa-kevitra hamaky tsy misy filazana mandritra ny vanim-potoana iray, dia zava-tsarobidy hanombohana an'ireny fitadidiana ireny. Bebe kokoa "
Boky Selections amin'ny Season
Afo ao amin'ny ran'i Irene Nemirovsky. Knopf
Ny boky sasany dia manana toe-javatra na feo mifanaraka amin'ny vanim-potoana iray. Raha manana volana voafaritra iray ianao rehefa miandraikitra ny fisafidianana ny bokinao, andramo ny safidinao ny boky izay hanasongadinana ny vanin-taona.
Boky tsara indrindra hovakina amin'ny ririnina
Torohevitra ho an'ny Club Book Clubs
Ny toeram-pialan-tsasatra nataon'i Corrie Ten Boom. Baker Publishing Group
Indraindray ny olona dia nanontany ahy boky izay hanampy azy ireo hiresaka momba ny fifamatoran'ny fiainana sy ny finoana. Ity lisitry ny fanoloran-kevitry ny klioba kristianina ity dia ahitana boky tantara fiction sy tsy misy fitaka izay mety hifaneraseran'ny vondrona kristianina.
'Gone Girl' an'i Gillian Flynn - Fanontaniana Momba ny Fanontaniana Momba ny Boky
Bilaogy Fanontaniana Momba ny Foto-kevitry ny Boky ho an'ny "alina" nataon'i Elie Wiesel
'Rano ho an'ny Elefanta' avy amin'i Sara Gruen - Fanontaniana Fanadihadiana Momba ny Club
'The Devil in the White City' nataon'i Erik Larson
Lisitry ny lisitry ny bokin'ny Club
'Life of Pi' avy amin'i Yann Martel - Fanontaniana Momba ny Fanontaniana ao amin'ny Club
'Ary ny Tendrombohitra Nihaino' an'i Khaled Hosseini
'Station Eleven' nataon'i Emily St. John Mandel - Fanontaniana ifanakalozan-kevitra
Fanontaniana ao amin'ny blaogin'ny klioba ho an'ny mpitarika ny mpitandrina ny Jodi Picoult
'Masoandro Masoandro Miely' avy amin'i Khaled Hosseini - Fanontaniana ifanakalozan-kevitra
"Wonder" avy amin'ny fanontaniana momba ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny RJ Palacio
Ny fiainan'ny miafina amin'ny fanontaniana momba an'i Sue Monk Kidd
Horonan-tsary momba ny fiainanao Ice breaker - iza ilay horonan-tsary? Karazana toetra inona moa ianao?
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Texas
Italiana Verbs: Radersi
3 Karazana taratasy fanoroana
Ny tantaram-piraisan'ny Duryea Brothers of Automobile
Top Chemistry Projects for Kids
Michael Vick Miady amin'ny alikaola
Rail Transit sy ny sanda ara-barotra
Ny fisehoan'ny Virjiny Maria sy ny fahagagana tany Guadalupe, Meksika
Adiresy misokatra any amin'ny Oniversite sy ny Oniversite
Nahoana no tena ilaina ny fanehoana fanajana ny mpianatra?
Renirano: Avy amin'ny loharano ka hatramin'ny ranomasina
Lisitry ny efatra ambin'ny folo tany Colorado
Ahoana ny fiasan'ny menaka fanafody?
Manjaka ny 11 tapitrisa ny mponin'ny Amerikana mpifindra monina tsy ara-dalàna
James Buchanan: Fomba manan-danja sy bikaogy fohy
Are Demons Angels Fallen?
Job Opportunity Mihaino fanatsarana quiz
Ampiasao ireo Adobe Acrobat (PDF) ao anaty fampiharana Delphi
UT Knoxville GPA, SAT ary ACT Data
Ireo sekoly ambaran'ny sekoly tsy miankina
College of Westminster, Salt Lake City Admissions
Ny paikady henjana ho an'ny andrim-panjakana
Virgo amin'ny fitiavana - Zodiac Compatibility